नयनराज पाण्डे | Nepal Flash
म नेपालगन्ज हुँदाको आफ्नो दसैँ सम्झिरहेछु । काठमाडौंमा दसैँ मनाउन थालेको निकै भयो । त्यसैले बाल्यकालमा नेपालगन्जमा मनाएका दसैँको धमिलो धमिलो सम्झना मात्र बाँकी छ । कतिपय प्रसंगहरू सम्झनाको डेस्कटपबाट डिलिट भैसकेका छन् । तिनीहरू कतै रिसाइकल बीनमा गएर बसेका...
ईश्वर, प्रेम र वर्तमान भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्नेहरू प्रशस्त छन् । मभित्रको एउटा तानाशाहले यसै भन्थ्यो । किनभने यो तानाशाहले आफ्नो नाडीमा बाँधेको थियो, एक दिनमा दुईपल्ट बाह्र बजाउने घडी । त्यसैले मात्तिएर भन्थ्यो- &#39;वर्तमान मेरो नियन्त्रणमा छ ।&#39;...
पहिलो किताबको कहानी
म तँलाई अच्छासित चिन्छु बे । तेरो नाम नयनराज पाण्डे हो । कथाकहानीका झन्डै एक दर्जन किताब लेखिसकिस् । दुईचार सयले चिन्छन् पनि होला तँलाई । तर, तँलाई मैले जति कसैले पनि चिन्दैन । एक दर्जन जति किताब छापियो भनेर...
तीन प्रधानमन्त्री र एउटा आम मान्छे
एकादेशमा, मैले भेटेको थिएँ तीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई । अहिले सोच्दा लाग्छ, नभेटेकै भए हुन्थ्यो । ००० त्यतिबेला मैले आफूलाई बहुतै ठुलो मनुवा सम्झिएँको थिएँ, जतिबेला पहिलोपल्ट नेपालका प्रधानमन्त्रीसित मेरो फेस टु फेस भेट भएको थियो । भावुकता घाँटीको मध्यभागमा अवस्थित मेरो...
मध्यरात । मध्यरातको सडक । र म मध्यरातमा यस सडकमा हिँडिरहेको मान्छे । मसित थोत्रो मोटरसाइकलरूपी एउटा वाहन छ यतिखेर । त्यसैले हिँड्नु भन्ने क्रिया माथि उल्लिखित वाक्यमा अलिक ठीक हुँदैन कि ? पख्नोस्, म यसलाई ठीक पारिदिन्छु । र...
उमेर तीस । तर ऊ अझै राम्री छे । आकर्षक छे । सिपालु छे । बोलीमा मिठास छ । चर्चित छे । ठाडै भनूँ ऊ वेश्या हो र उसभित्र रहेका यतिका विशेषताहरूले उसको व्यवसायलाई सजिलै धानिरहेछन् । रातभरि उसलाई थुप्रैले...
&#39;ओहो ! हजुरले कैले पनि पिइबक्सन्न ? साँच्ची ? हजुरलाई रम, ब्रान्डी, ह्विस्की, वाइन कसैको पनि स्वाद थाहा छैन ? हजुरजस्तो व्यक्तिलाई पाएर हामी धन्य भएका छौँ । खुसी छौँ । साह्रै खुसी छौँ । हजुरको नेतृत्वमा काम गर्न हामी...
त्यतिबेला मैले मोटरसाइकल चलाउन जानेकै थिइनँ। डेरानजिकैको एउटा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटको गुरुजीसित केही दिनअघि पुतलीसडकको पुष्करको सेकुवामा चिनजान भएको थियो । त्यतिबेला मखसीको आँखा र जिब्रो फ्राइ खाँदै थिएँ। गुरुजी भने बोकाको राजखानी खाँदै थियो । राजखानी खाँदै गफ लगाएको थियो...
कक्षा आठ या नौ पढ्दा भूगोल शिक्षक मतिउद्धिन सरले भन्नु भएको थियोनेपालगन्ज समुद्र सतहभन्दा एक सौ उनन्चास मिटरमात्र माथि पर्छ । कुनै दिन समुद्रको सतह एक सौ पचास भयो भने नेपालगन्जमा समुद्र पस्छ । उहाँले जुन जानकारी दिनु भएको थियो,...
आफ्नै अतीतको पटकथा
सबैसित अतीत हुन्छ । मीठा नमीठा सम्झनाहरू हुन्छन् । मसित पनि छन् । मीठा उस्तै, नमीठा उस्तै । तर, जब आफ्नै अतीतसित वार्तालाप गर्न थालिन्छ, बितेर गएका सबै पलहरू सुन्दर लाग्छन् । अर्थपूर्ण पनि लाग्छन् । अतीतको सम्झनाले हामीलाई फेरि...
ऊ हाँस्दै मनेर आएर उभियो । नमस्कार दाइ भन्यो । मैले नमस्कार फर्काएँ । हालचाल सोध्यो । सन्चै छु भने । चुरोट झिकेर दियो र आफूले पनि लियो । सल्केको सलाईको काँटी पहिले मतिर बढायो र त्यसपछि मात्र आफ्नो चुरोट...
धुनकी । हो, त्यसलाई धुनकी नै भनिन्थ्यो । कसैकसैले फटका पनि भन्थे । ऊ एउटा पुरानो धनुषाकार धुनकी लिएर जाडोयाममा घरघरमा सिरक बनाउन बजारतिर आउँथ्यो । शिवराम थियो उसको नाम । आफैँले भने आफूलाई स्युराम या सिराम भनेर चिनाउँथ्यो ।...